Meelaha ugu wanaagsan ee iimaylka suuq geynta ganacsigaaga | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Technologies
Waxaa hadda jira a taxane ah adeegyo isku dayaya inay u xagliyaan maareynta dhammaan emayllada macaamiisha si loo qaado ololeyaal suuqgeyn wax ku ool ah. Barxadaha sida Mailrelay ee diraya emayllo tiro badan ayaa ah waxyaabaha lagu beddelan karo farxadda markii la dooranayo dhagaystayaasha noogu habboon ololaha suuqgeynta.
5 Kormeerka Ololaha
8 Xiriir joogto ah
12 Jawaab toos ah
Una beddelka xiisaha leh sida suuqgeynta iimaylka iyo in si fiican loo dhex galay wadankeena waa Mailrelay. Waxay leedahay qorshe bille ah oo bilaash ah oo gaaraya ilaa 3.000 oo macaamiil waxayna adeegsataa astaamo qaar si xisaabta loogu darsado sida tirakoobkeeda horumarsan, algorithms u gaar ah oo ka caawiya imaatinka boostada tirada badan, iyadoo aad leedahay la-taliye kuu gaar ah iyo is-weydaarsi bilaash ah oo aad adigu u habeyn karto.
Shaki la'aan, Mailrelay waa madal ay la galaan adduunyada suuqgeynta iimaylka iyo dirista wadareed si loo aado imtixaan laga yaabo inuu aad noo xiiseeyo. Waa xulashooyinkaas oo waafaqsan sharciga xogta YurubSidaa darteed, haddii aad ka walaacsan tahay arrintan, waa ikhtiyaar inaad tixgeliso ololeyaal emayl ballaaran. Waxay leedahay foojarro horay loo sii siiyay oo kuu oggolaanaya inaad ku gaartid tirada saxda ah ee emayllada qiimaha tartanka oo ay ka mid tahay xadka macaamiisha emaillada la soo diray. Faahfaahin ahaan, waxay leedahay barnaamij loogu talagalay iPhone ee qorshaha Enterprise.
Mailchimp waxay u soo baxday inay tahay mid ka mid ah adeegyada ugu fiican markay tahay maareynta dhamaan e-mayllada laga yaabo inaan ka helno kumanaan macaamiil ah oo ku soo biiray wargeyskeena. In kasta oo ay ugu wacan tahay sharciyada ilaalinta xogta Yurub, adeeggan Wuxuu lahaa dad isaga soo horjeeda oo aad u adag in la dilo iyo inay u isticmaalaan inay ku xafidaan xogta macaamiishooda dhulalka yurub, sidaa darteed ma aha wax cabsi gelin kara haddii aan raadino in liistadayada dirista ay ku wareegsan tahay qaybahan.
Waxaan nahay ka hor mid ka mid ah magacyada waaweyn marka qofku ka hadlayo suuqgeynta iimaylka. Akhlaaqdeeda wanaagsani waxay maraysaa iyada oo la siinayo waxyaabo badan oo kala duwan oo u oggolaanaya ganacsi weyn ama yar in ay si dhammaystiran ula shaqeeyaan suuqgeynta emaylka ay uga baahan yihiin hal madal.
Kuwa loo isticmaalay sifooyinka Mailchimp, waxaan ka hadli karnaa afar hawlood oo aasaasi ah- Dhise olole fudud, astaamaha emaylka awood u leh otomaatigga, falanqayn qoto dheer, iyo boqolaal is-dhexgal la leh aalado kale. Waxaan sidoo kale ka hadli karnaa sheybaaradaada ama nidaamka jiita-iyo-hoos u dhaca ah si loo sameeyo abuurista ololeyaal sida ugu fudud ee suurtogalka ah.
Waxaa ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan, ee loogu talagalay adeeg la aasaasay 1998, waa midkeeda awood u leh inuu abuuro liisas badan oo emayl ah si uu u kaydiyo kooxo kala duwan macaamiisha. Waad u abuuri kartaa dhammaan nidaamyada otomatiga ah ee emayllada aad rabto, si aad ugu adeegsato inay "ugu adeegaan" waxa ku jira macaamiisha aan hayno.
Waxay bixisaa marin u helka maktabadda arrimo, interface-jiid-dhibic, barnaamijka moobiilka si aadan waxba u seegin bog kasta, isdhexgalka warbaahinta bulshada iyo ikhtiyaarka ah in la maro tijaabada bilaashka ah iyada oo xaddidan 500 xiriir. Waxaa laga yaabaa in qodobkani dib kuu tuurayo, maxaa yeelay waxaad si dhakhso leh u arki kartaa naftaada oo laga tiro batay waana inaad u gudubtaa lacagtaada bil kasta.
Waxaan ka hadli karnaa iyaga Hawlaha CRM si ay u maareeyaan hogaaminta cusub ee aan raadineyno, ama guddi xakameyntiisa oo aad u fudud isticmaalkeeda oo kuu oggolaanaya inaad barnaamij ka dhigto dirista ballaaran ee emaylka. Waxaan wajaheynaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu xiisaha badan, haddii aan dooneyno adeegyo dheeri ah marka laga reebo maareynta warsidaha.
Waxaa lagu gartaa isku-xirkeeda-iyo-hoos udhax-galka, otomaatiga suuq-geynta, guddi koontarool macquul ah, qalabkiisa maaraynta xiriirka iyo awoodda lagu abuurayo habsami u socodka iibka. Ma iska indho tiri karno awoodeeda ay kula midoobi karto in ka badan 150 barnaamij. A meheradaha ugu fiican ee ganacsiyada yaryar iyo bilowgaba kuwaas oo bilaabaya safarkooda waxayna rabaan inay wax walba ku yeeshaan hal: suuq geynta emaylka, CRM iyo aaladda iswada.
Toos ugu sameynta fariimaha shaqsiga ah taasina waxay ka dhigeysaa sumadeena inay ka dhex muuqato dhamaan macaamiisha aan ka mid noqonay. Dhammaan emaylladaada waxaa loo sameeyaa si ay ugu shaqeeyaan si aad u wanaagsan go'aanno kala duwan iyo cabbirka shaashadda.
Waxay ku habboon tahay jadwalka dirista ololayaasha waqti cayiman si ay ugu bixi karto kaliya waqtiga aan dooneyno. Mid adeegyada ugu caansan, oo gaaraya 200.000 oo ganacsi adduunka oo dhan
Mid kale oo ka mid ah magacyada muhiimka ah suuqgeynta iimaylka. Waa ku habboon ganacsiyada yaryar / dhexdhexaadka ah oo waxaan dhihi karnaa in tayada ugu fiican ay tahay inay si toos ah nooga qaadato waxa aan uga baahanahay adeegga suuqgeynta emaylka. Taas macnaheedu waxa weeye, haddii aad adduunkan ka bilaabayso, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican.
Waxay bixisaa noocyo kala duwan oo arrimo, in ka badan 500, oo waxay caan ku tahay qiimaha isticmaalaha qiimaha weyn. isaga kharashka waa mid la awoodi karo marka la barbar dhigo adeegyada kale oo waxay leedahay astaamo qaar in la faahfaahiyo, laakiin in la soo koobo waxa suuq geynta iimaylku laftiisu yahay mid ka mid ah qiimayaasheeda ugu weyn. Waxaad ku eedeyn kartaa sharci la'aan la'aanta otomatiga, laakiin haddii kale, toban. Sidoo kale waa la mahadiyey inaan ku haysanno Isbaanish, sidaa darteed waxba kama maqna.
Uno cusub laga bilaabo emaylka suuqgeynta taasna waxaa la go'aansaday inuu noqdo barxadda ugu habboon ee loogu talagalay qorayaasha wax qora, qorayaasha iyo kuwa u heellan inay ka warbixiyaan dhammaan noocyada wax soo saarka. Sidii aan soo sheegnay, waxay diiradda saarayaan dadka wax qora ee wax qora, sidaas darteed waxay leedahay qalab taxane ah oo aad u fudud si loo abuuro liis isla markaana loogu wareejiyo waxyaabaha ku jira emayllo tiro badan.
Isku xirnaan leh faahfaahin yar, oo doorbidaysa aragtida foomamka websaydhka, emayllo tiro badan iyo hababka otomatiga, adigoon ilaawin qayb loo sameeyay dhismaha ololeyaal emayl oo ku saabsan koorsooyinka webka. Ma haystaan ​​ikhtiyaar ikhtiyaar ah, oo qiimahoodu waa labanlaab kan GetResponse, markaa waa inaad fiirisaa shaqadaas gaarka ah si waan ognahay sida looga faa'iideysto si fiican hadaan nahay blogger.
Ku dhic khadadkaan adoo 60 maalmood oo bilaash ah kaas oo aad runtii ku ogaan karto inay tahay waxa aad u baahan tahay. Mid kale oo loogu talagalay shirkadaha yaryar oo lagu gartaa fudeydkiisa markii la tafatirinayo qaab-bixiyeyaasha ay bixiyeen markii hore. Qiimayaashooda kale ayaa ah in emaylladooda waaweyn ay la yimaadaan 98% iyo waxa ay ku faanaan.
Waxaan sidoo kale ka faalloon karnaa isdhexgalka cusbooneysiiyay illaa maanta, otomaatiga fudud ee ololaha iyo mudada tijaabadeedu ay marayso ilaa 60 maalmood si aad naftaada u qanciso. Markaad dooranaysid madal waa mid xiiso leh in la tijaabiyo dhowr, iyo haddii ay u oggolaadaan adeegsiga sida joogtada ah ee loo yaqaan 'Constant Contact', dhammaantood way fiicnaanayaan. Mid ka mid ah dhibcaheeda xun waa qaababkeeda xaddidan iyo sidoo kale xulashada qaabeynta.
Un adeeg ku faano naqshad weyn tanina waa mid la dareemi karo xilligan aan eegayno ururinta badan ee tusaalooyinka ay na siiso. Kooxda ka dambeysa adeegan sidoo kale waxay siisaa awood ay ku shaqaaleeyaan iyaga si ay u abuuraan shax u gaar ah ama xitaa inay jadwal u sameeyaan olole.
Waxay ku dhex jirtaa barnaamijyada sida Shopify, sidaa darteed waxaad diirada saari kartaa emayllada iibsaday mid kamid ah alaabtayada. Tani maahan adeeg raqiis ah, laakiin waa mid ka mid ah kuwa ku habboon in la abuuro emayl leh qaab taabasho gaar ah.
Waxaan wajaheynaa bedel kale oo Isbaanish ah oo dadka kale ka fog Bixiyaan awood aad ku maareyso dhammaan xiriirada aan ka leenahay barnaamijyada kale in aan horeyba ugu isticmaalnay ganacsigeenna. Macaamiisha aan horeyba ugu haysanay liistada, marka laga reebo bixinta fursadda aan ku helno xiriiro cusub oo ku soo biira liiska liiskeena.
Lagu dhex daray barnaamijyada sida Salesforce ama xitaa Drupal, waad soo dejin kartaa xiriirada waxaadna isticmaali kartaa xogtooda si aad u kala soocdo liistada la abuuray. Kama dhaafi karno agabkooda xiriirka bulshada si aan u bilowno qoraalo la qorsheeyay oo Twitter iyo Facebook ah.
Qalabkan suuqgeynta emailka ayaa adeegta farriimaha emaylka iyo SMS-ka labadaba, markaa waa "laba mid" mid loogu talagalay websaydhkaaga. Barxad ku habboon in lagu dhex daro WordPress, PrestaShop iyo Magento, iyo sidoo kale inay yeelato API-keeda si aan annaga keligeen u dhexgalno.
Wargeysyada emayllada ah, ololeyaasha faleebada iyo emayllada macaamilku waa qaar ka mid ah shaqooyinkiisa ugu waaweyn, sidoo kale waa awood u leh abuuritaanka sheybaarkeenna ama soo dejinta bogga HTML si aan ugu dirno emayl ahaan. Qiimaheedu waa bilaash illaa laga diro 9.000 emayl bishiiba, markaa waa inaan iska bixinno $ 7,37 bishiiba si aan u dirno 40.000 emayl. Oh, iyo sidoo kale waxay ku jirtaa afkeenna.
Jawaab toos ah
Jawaab toos ah wuxuu adeegsadaa interface fudud oo nadiif ah oo fududeynaya waxyaabaha markaad sameysid emayllo qurux badan si aad ugu dirto xiriiradayada. Template-ka-diyaargarowga ah ayaa loo isticmaali karaa, loo tafatiri karaa loona beddeli karaa labadaba emayl iyo foomamka rukunka.
Waxaan nahay ka hor ka kooban emaylka loogu talagalay mobilada, ama, waxa la mid ah, jawaaba. Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad ku dhex biiriso Salesforce si aad u hesho mashruucyo suuqgeyn sare leh. Bilaash ilaa 4.000 emayl iyo 1.000 xiriir bishiiba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » Meelaha ugu fiican ee maareynta warsideyaasha
Waxay ila tahay aniga in Acumbamail lagu daro liiskan, si fiican ayey u shaqeeyaan oo waxay leeyihiin qiime aad u tartan badan.
Maria iyadu ma aqoon iyada, waad ku mahadsan tahay inaad soo bandhigtay iyada! Salaan kadib, isha ayaan ku hayn doonaa: =)